Efa mazava, hoy ny sekretera jeneralin’ny MFM, Olivier Rakotovazaha, ny fanapahan-kevitra noraisin’ny firenena mikambana tamin’ny volana desambra 1979 izay mandidy ny hamerenan’i Frantsa ireo nosy ireo ho an’ny Malagasy. Ny fanatanterahana io fanapahan-kevitra io no imasoan’ny fitondrana ankehitriny ary ny fiarahana amin’ireo vondrona iraisam-pirenena misy an’i Madagasikara no anisan’ny paikady mahomby amin’izany. Notsiahiviny hatrany fa efa voarakitra tao anatin’ny fehin-kevitra nosoratan’ny MFM tamin’ny volana novambra 2015 momba ny soso-kevitra hamerenana ny nosy Eparses an’i Madagasikara. Mikasika ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena frantsay amin’ny hametrahana toeram-pikarohana momba ny tontolo iainana dia milaza ny MFM fa fanapahan-kevitra feno fihatsaram-belatsihy izany. Harem-be no ao anatin’ny nosy Eparses ary ilaina ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra tamin’ny taona 1979 mba ho tombontsoan’ny firenena satria ny Malagasy dia misitraka ny zo amin’ny fitrandrahana sy fitantanana ireo nosy ireo, hoy hatrany ny fanazavana.